Kpọtụrụ Hunter hogan anyị — HunterThinks.com
Àgwà nke ala na nzuzo kọntaktị
Mgbe ị kpọtụrụ m, gị na ezinụlọ gị, enyi gị, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-echebe gị na nche na nzuzo, mgbe ị na-achụ àjà nche na nzuzo nke ndị enyi gị na ndị ezinụlọ. Ị chọrọ na-afụ ụfụ na ndị ị hụrụ n'anya? Ọ bụrụ na bụghị, ịmụta ihe-na-eji na-emebi àgwà nke nche na nzuzo.
Biko, naanị kpọtụrụ m na ala na nzuzo ụzọ.
Jiri a paswọọdụ manager
Enweghị ike okwuntughe, ala na nzuzo ngwa na-adịghị nọrọ ná nchebe ma ọ bụ onwe. Ọ bụrụ na ị na-eji otu paswọọdụ na ihe karịrị otu ebe, ị imebi gị nche. Iji chebe onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya, iji a paswọọdụ manager such as LastPass.
Kpọtụrụ Hunter hogan anyị, na email
Best nhọrọ: send from your Protonmail to my Protonmail
Mgbe ị na-eziga email gị Protonmail akaụntụ ọzọ Protonmail akaụntụ, niile nche na nzuzo bụ akpaka na mfe. Olee otú ime ya:
Ị mepụtara a Protonmail akaụntụ.
Zipu email gị Protonmail m Protonmail: [email protected]
Maka masochist, public key encryption
Ọ bụrụ na ị na-aghọta ọha isi ezo, na ọ bụrụ na ị na-enwe na-enweghị isi na-arụ ọrụ, ị nwere ike ibudata m [email protected] ọha isi. I prefer Protonmail to Protonmail because the metadata stays within the Protonmail servers, n'ihi ya ihe nzuzo.
M nwere ndị ọzọ na adreesị email, na ụfọdụ n'ime ha nwere ọha igodo, ma, biko na-adịghị eji ha ugbu a.
Ezoro ezo na kọntaktị ụdị
Ndị na-esonụ na kọntaktị ụdị-eziga ihe ezoro ezo ozi m. Kama n'ihi na unu nwere ike tinye a adịgboroja email address, M eleghị anya, agaghị zaghachi ozi zigara site na nke a ụdị.
Aha gị :
Adreesị ozi ịntanetị gị :
Ozi gị :
Kpọtụrụ Hunter hogan anyị, na nzi ozi
dị ka nke 5 March 2018, nche, nzuzo, and cross-platform accessibility of waya – Private ozi make it far superior to all other applications. Ihe niile ọzọ bụ a liability.
Categories Enyemaka Tags Encryption, Password manager, Nzuzo post igodo
igbu onwe, ma ọ bụ na-ezu ohi na-adị ndụ?